Fahasalaman’ny reny sy ny zaza: hotohanana ireo toeram-pitsaboana tena ilain’ny mponina | NewsMada
Fahasalaman’ny reny sy ny zaza: hotohanana ireo toeram-pitsaboana tena ilain’ny mponina
Mbola maro ny vehivavy tsy mandeha miteraka any amin’ny toeram-pitsaboana, hany ka betsaka ny ahiahy ny amin’ny tsy haha tomombana ny fiterahany, izay mety hitarika fahafatesana. Manoloana izany, misy ny toeram-pitsaboana hotohanana manokana.
Nahitam-pihenana ny tahan’ny vehivavy mamonjy toeram-pitsaboana rehefa hiteraka. 38% izany tamin’ny taona 2012-2013, nihena ho 30,5% ny 2017 ary tafalatsaka 25% tamin’ny taon-dasa. Vokatry ny tsy fanatonana toeram-pitsaboana, ahina kokoa ny fahafatesan’ny reny eo am-piterahana, raha misy fahasarotana.
Manoloana izany, hotohanana ireo toeram-pitsaboana hita fa mila izany, hanamora kokoa ny fandehanan’ny reny bevohoka miteraka any sy ahafahany miatrika fiterahana azo antoka. Tanjona ny hampihena ny taham-pahafatesan’ny reny na ny zaza eo am-piterahana. Notanterahina, omaly teny amin’ny Le Pavé eny Antaninarenina, àry ny atrikasa nijerena na nisafidianana ireo toeram-pitsaboana hotohanana. Hatao anaty taosarintany ny toerana misy azy ireo.
Hatomboka amin’ny faritra 13 ny tetikasa
Nikarakara ny atrikasa ny minisiteran’ny Fahasalam-bahoaka sy ny Tahirin’ny Firenena mikambana ho an’ny mponina (UNFPA). Nanatrika izany kosa ireo mpamatsy vola sy mpiombon’antoka teknika, ny avy amin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany, ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola, ny minisiteran’ny Rano sy ny angovo, ny minisiteran’ny Fitaterana.
Tao koa ny tompon’andraikitra misahana ny fahasalamam-bahoaka any amin’ny faritra miisa 13 (Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Menabe, Vatovavy Fitovinany, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Itasy, Vakinankaratra, Analamanga, Analanjirofo, Boeny, Sofia). Ireto farany no tena mahalala ny olana any amin’ny toeram-pitsaboana iasany avy. Marihina fa atomboka amin’ireo faritra ireo aloha ny tetikasa.
Ampy ny mpitsabo sy ny fanafody…
Nojerena ny olana amin’ireo toeram-pitsaboana hotohanana. Raha tiana ny hanatratra ny tanjona, tokony ho voaray sy ho voakarakara hatrany ny mpiteraka, na andro na alina. Tokony ho ampy ny isan’ny mpitsabo sy ny mpampivelona ary ny mpitsabo mpanampy. Tokony ho mora ny lalana ahatongavan’ny mpiteraka any amin’ireo toeram-pitsaboana. Tokony ho ampy koa ny fanafody.
Taorian’ity atrikasa ity, hitohy amin’ny famahana ny banga amin’ireo fepetra ireo ny asa. Eo no ilana ireo mpiara-miombon’antoka sy ireo minisitera samihafa ireo. Iankinan’ny aina ny fanatanterahana izao asa izao ary antenaina ny hahatanteraka haingana izany.